Ny diplaomasia ekônômika, antoky ny fampandrosoana, Nosoratan’Andriamatoa RAJOELINA Patrick, Minisitry ny Raharaham-bahiny | Ambassade de la République de Madagascar au Canada
Ny diplaomasia ekônômika, antoky ny fampandrosoana, Nosoratan’Andriamatoa RAJOELINA Patrick, Minisitry ny Raharaham-bahiny
Hatramin’ny taona 2018 nahavoafidy ny Filohan’ny Repôblika, Andry RAJOELINA, dia asa maro voafaritra ao anatin’ny Velirano 13 izay nitokisan’ny vahoaka malagasy azy no efa vita. Anisan’izany ny fitandroana ny fandriampahalemana, ny fampivoarana ara- toekarena, ny fametrahana ireo fotodrafitrasa maro, ny fanatsarana ny lafiny fanabeazana, ary ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny fahasalamana.
Tetikasa maro ihany koa no notanterahiny nandritra izay telo taona lasa izay, toy ny fanarenana ny toe-karena sy ny fanavaozana amin’ny lafiny manontolo eto Madagasikara. Izany ezaka izany no itondrany ireo vahaolana mety indrindra, mifanaraka amin’ny filàn’ny mponina manerana ny Faritra 23 eto Madagasikara.
Lalana soritan’ny Filoha Andry RAJOELINA ankehitriny ny fampivoarana ara-toekarena eto Madagasikara, amin’ny alalan’ny fanaovana ireo ezaka hampitomboana ny fampiasam-bolam-panjakana sy ny fampiasam-bolan’ireo sehatra tsy miankina, ny fanatsarana ny tetik’asa fanondranana ireo vokatra vokarina eto an-toerana amin’ny sandany mifanaraka amin’ny tokony ho izy, ary ny famoronana asa sy ny fanetsehana ny fanohanana ny Indostria maharitra.
Tombontsoa. « Ny diplaomasia ara-toekarena no tena antoky ny fampandrosoana ».
Io diplaomasia ara-toekarena io no :
- Manamora ny fahafahan'ireo orinasam-pirenena mivelatra amin’ny sehatra any ivelany sy mampiroborobo ny tetik’asa fanondranana;
- Misarika ireo mpampiasa vola maro avy any ivelany, sy mampiroborobo ny fizahantany eto amin’ny tanin’ny Malagasy;
-Mampiditra ireo seha-pihariana maro eo amin’ny sehatra iraisampirenena, hisitrahan’ny vahoaka malagasy ny tombontsoa azo avy amin’ izany, izay mifanaraka tanteraka amin’ ny fitsipika iraisampirenena.
Andraikitra sy fifandraisana any ivelany. Ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny, izay miandraikitra ity diplaomasia ara-toekarena ity, dia mandray anjara mivantana amin’ny fampandrosoana ny Tanindrazana, mampifandray ireo orinasa malagasy amin’ ny any ivelany, sy mampisokatra ny fikarohana ny lalam-bola amin’ny alalan’ireo asa vita eto an-toerana. Noho izany dia miantoka ny tombontsoan’ny firenena izany Departemanta izany, amin’ny fifampiraharahana isam-paritra sy eo anivon’ny sehatra iraisampirenena.
Tao anatin’ny zato andro mahery, ohatra, dia nahavita nametraka tetik’asa ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny mba hisian’ny antsoina hoe: “Madagascar compétitif”, hamporisihana ny fampiasam-bola sy ny fampiroboroboana ny “Vita Malagasy”, ary koa ny fizahantany nandritra ireo hetsika maro notanterahiny toy ny fihaonana tamin’ireo mpandraharaha frantsay (REF) 2021. Nisy nandritra izany ny fifanakalozana teo amin’ireo orinasa malagasy sy frantsay.
Tao anatin’ny fitoviam-pomba fijery eo amin’ny sehatra fampiroboroboana ara- toekarena koa, dia afaka nanokatra fiaraha-miasa vaovao eo amin’ny sehatry ny fizahan-tany i Italy sy Madagasikara, tamin’ny alalan’ny fanatrehana ilay hetsika antsoina hoe : « Italia-Africa Business Week ». Tsy izany ihany, fa ireo seha-pihariana maro hafa koa, toy ny fambolena ara-tsakafo, ny fanofanana arak'asa, ny asa tanana, ary ny fanamboarana fanafody. Tsy ho ela dia hihamaro ireo hetsika azo atao mba hampiroboroboana ny fampamirampiratana an’i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisampirenena.
Fanatsarana ny endriky ny diplaomasia anatiny. Raha ny eto an-toerana kosa indray no resahana, dia namorona ny « Hetsika iraisampirenena ho an’ny Faritra », na ny « Journée internationale des Régions » ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny, niarahana niasa tamin’ny Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana izany, toy ny natao vao haingana tany amin’ny Faritr’ Itasy sy ny Faritr’i Sofia. Ireny hetsika ireny dia natao indrindra hampiroboroboana ny Faritra tsirairay eto Madagasikara, sy hanehoana ny fahavitrihana amin’ny fanomezan-danja ny diplaomasia eto amintsika.
Amin’ny ankapobeny, ny fifanakalozana eo amin’ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny sy ireo mpiara-miombon’antoka samihafa, isan’izany ny sehatra tsy miankina eto an- toerana ; dia mikendry ny hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina ao anatin’ny fampiharana ny diplaomasia ara-toekarena eto amintsika.
Pôlitika. Eo amin'ny lafiny pôlitika kosa, ny momba ny fitakiana ireo Nosy malagasy, na Nosy miodidina, anatin'ny faritra "Canal de Mozambique" izay ahitana fifandirana amin'ny firenena Frantsay; dia mitohy hatrany ny dinika sy ny fifampiraharana anatin'ny kaomisiôna iraisan'ny Malagasy sy ny Frantsay. Ary heverina fa afaka fotoana fohy dia ho voaantso any Frantsa ny kaomisiôna hanohy izany dinika izany. Manentana hatrany ireo firenena namana hanohana an'i Madagasikara amin'io fitakiana io.
Ny Diplaomasia dia midika ihany koa fanentanana ireo rantsamangaika rehetra izay mandray anjara amin'ny fampandrosoana sy fisandratan’i Madagasikara (Emergence de Madagascar) : Ireo Malagasy ampielezana sy ireo naman'i Madagasikara.
Ireo Malagasy ampielezana no solontena sy masoivoho voalohan’i Madagasikara any ivelany, ary izy ireo dia mpandray anjara tanteraka amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ireo Malagasy ampielezana mipariaka manerana izao tontolo izao dia anisan'ny andry lehibe eo amin'ny seha-pampandrosoana maro, amin'ny alalan'ny talenta, sy ny fahaizana, ary ny hai-tao maro karazana, ary ilain'ny Tanindrazantsika ny fisian'izy ireo eo amin'ny sehatra iraisampirenena.
Zava-dehibe amin'ny fitondrana malagasy ankehitriny ny fanomezana vahana ny fahaiza-manao an'ireo Malagasy ampielezana, indrindra eo amin'ny sehatra ara- toekarena sy sôsialy. Ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny dia tsy mitsinjo fotsiny ireo Malagasy monina any ivelany, fa manamora ny fifandraisana eo amin'ireo Malagasy ampielezana sy ireo mpiara-miombon'antoka, eo amin'ny lafiny fampiasana vola sy fandraharahana, ho fanomezan-danja ny harena eto amin'ny firenena.
Farany, ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA dia manamafy hatrany ny hisian'ny fitondrana tan-dalàna sy tsara tantana, amin'ny alalan'ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly, satria izany dia isan'ny mamaritra ny firenentsika eo amin'ny lafiny fitantanana mirindra. Ny tahan'ny kolikoly dia famaritana lehibe ho an'ny fampandrosoana an'i Madagasiakra raha tsy hiresaka fotsiny ny IDE na "Investissements Directs Etrangers", izay midika fa miankina tanteraka amin'ny tontolon'ny seha-pandraharahana ny fampandrosoana ny firenena.
Raha ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny dia mitandro hatrany ny hisian'ny mangarahara eo amin'ny seha-piharana sy ny asa rehetra atao manodidina ny diplaomasia, amin'ny fampitàna izany amin'ny alalan'ny tambazotram-baovao. Tafiditra ao anatin'izany fanajana ny mangarahara izany ny fiantsoana (nampitaina tamin'ny tambazotran-tserasera sy fampahalalam-baovao) ireo olona rehetra maniry ny hiandraikitra ny asan’ny Masoivoho, hisolo tena ny firenena malagasy any ivelany sy any anivon'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ankoatra izay, ny fanendrena ireo mpiasam-panjakana eo anivon'ireo masoivoho solontena any ivelany, dia voafehin'ny didim-panjakana na "Décret". Ny eo anivon'ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny kosa, izay iandraketako, dia misy ny fifandimbiasan'andraikitra eo amin'ny mpiasa mandrafitra ny Ministera. Ary ny tenako dia manamafy sy miezaka hatrany amin'ny fanajana ny rafitra sy ny lamina napetraka anatin'ny mangarahara.
Ny ezaka ara-diplaomatika izay mipaka amin'ny rehetra, tarihin'ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA, izay lohan'ny Diplaomasia malagasy, araka ny andininy faha 57 ao amin’ny Lalàmpanorenenana, dia zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ankapoben’ ny firenena, sy ny famirapiratan'i Madagasikara amin'ny sehatra any ivelany.
Ny Ministeran'ny Raharaham-bahiny araka izany, dia vonona, mavitrika, ary miasa ho an'ny fampandrosoana sy ny fisandratan’i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisampirenena, mba hananan'ny vahoaka malagasy manerana ny Faritra 23 Tanindrazana miaina anaty filaminana sy tahian'Andriamanitra.
Ataontsika mamiratra indray i Madagasikara!